A na-agbakwunye ngwa ọhụrụ 3 na ndepụta nke ngwa Samsung na Windows 10 | Gam akporosis
Samsung dị njikere iweta ngwa ndị ọzọ na Windows 10: Share Share, Samsung Free na Samsung O
Onwekwaghị onye hụrụ ya anya ọzọ otu Samsung na Microsoft si emekọrịta ihe, na ndị ọzọ mgbe anyị matara na ọbụnadị nke mbụ ga-eweta ọtụtụ ngwa na Windows 10. N'etiti ndị ngwa ọdịnala anyị nwere ike ịgụ Ndenye Share ma ọ bụ Samsung Free.
Ọzọ ọ na-eweta ozi ọzọ maka nke ahụ njikọ pụrụ iche kere n'etiti ha abụọ ka One UI / Android na Windows 10 nwee mmekọrịta karịa nke ọma na ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ụdị ahụmịhe ndị ọzọ anyị na-atụ uche na sistemụ ndị ọzọ.
N'ezie na njikọ pụrụ iche anyị gosipụtara na vidiyo a nke anyi n’egosi gi ihe nile enwere ike ime Njikọ Windows n'etiti Samsung mobile na Windows 10; ịmalite ịgụ na Ndenye Ekekọrịta na Samsung Free.
Ndenye Ekekọrịta anyị amaworị ya nke ọma na ọ bụ ngwa ahụ ngwa ngwa kesaa ọdịnaya niile achọrọ na kọntaktị ma ọ bụ ngwa ndị a kacha eji, ebe Samsung Free na-eweta isiokwu efu, ihe ngosi na egwuregwu na ya. Ihe na-abụ ihe omimi bụ Samsung O.
Ndenye Share ga-ekwe ka anyị kekọrịta site na ekwentị mkpanaaka Samsung ozugbo ihe dị na ya dị ka onyonyo, vidiyo na dọkụmentị na Windows 10. Enwere ike iji ọwa njikọ njikọ dị iche iche dị ka Smart Ihe, Wi-Fi Direct ma ọ bụ Bluetooth. N'ezie, ị ga-atụkwasị obi na ị ga-enwe One UI 2 na Samsung mobiles iji nwee ike iji ya.
Samsung n'efu Ga-ekwe ka Windows 10 Ọrụ Nweta Free TV Channels nke Samsung TV Plus na ngosipụta ngosi, ebe ị ga-enwe ike ịhọrọ maka akụkọ na akụkọ sitere na isi mmalite dị iche iche. Akụkụ ikpeazụ ga-abụ ngalaba egwuregwu n'efu na ndị mmepe ahọpụtara.
Samsung O ọ bụghị n'ezie mara ihe ngwa ọ ga-abụ, ọ bụ ezie na e nwere enyo na anyị ga-ekwu okwu banyere ngwa mmepụta oyiri. Nọrọ na-ege ntị maka ụbọchị ole na ole sochirinụ n'ihi na a ga-ebipụta ya, yabụ ugbu a Maara ihe na-echere gị na ngwa ọhụụ Samsung maka Windows 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Samsung dị njikere iweta ngwa ndị ọzọ na Windows 10: Share Share, Samsung Free na Samsung O
Esi edozi nsogbu na mkpisiaka mkpịsị aka na ngwaọrụ gam akporo gị
SPC Smart Plus bụ ekwentị 3G ọhụrụ na gam akporo 10 Go